February 2015 ~ Myanmar Online News
ဖုန်ကြားရှင်တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲမှ ပြည်သူများ၏ ရှားရှားပါးပါးထောက်ခံမှုကို ရခဲ့သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်
5:29 PM ပြည်တွင်းသတင်း, ဆောင်းပါး No comments
ကိုးကန့်ဒေသတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တပ်မတော်သားများ (ဓာတ်ပုံ − STRINGER / AFP)
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်တပ်ဖွဲ့များ အကြားတိုက်ပွဲများကြောင့် မြန်မာ လူထုက ကာလရှည်ကြာစွာကြောက်ရွံ့ခဲ့သည့် မြန်မာ့တပ် မတော်နှင့် ပြည်သူလူထု အကြား ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်တိုးတက် လာခဲ့သည်။ လူမှုရေးအင်တာ နက်စာမျက်နှာတွေကနေ စစ်တပ်ကို ချီးမြှောက်အားပေးကြပြီးနိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေ ကပင် သူတို့၏ အားပေးထောက်ခံ မှုတွေကို မသိမသာ ဖော်ပြလာကြ ပါသည်။
ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များတွင် ညပိုင်းချိန်းတွေ့သော စုံတွဲများထံမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လုယက်ထွက်ပြေးမှု များလာ
5:27 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်းမှ ဆိုင်ကယ်စီးပြည်သူတစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))
ရန်ကုန်မြို့ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များတွင် ညအချိန် မှောင်ရိပ်ခို၍ ချိန်းတွေ့နေသော စုံတွဲများထံမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပစ္စည်းလုယက်ထွက်ပြေးမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လာကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်း ရရှိသည်။
အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ရေးတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ အလွတ်တန်း ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
မုံရွာသပိတ်စစ်ကြောင်းနှင့်အတူ တွေ့ရသည့် ကိုအောင်နေမျိူး (၀ဲ) (ဓာတ်ပုံ − မျိုးမင်းဦး)
အစိုးရကို အကြည်ညို ပျက်စေရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ရေး သားခဲ့သည်ဟုဆိုကာ မုံရွာမြို့မှ အလွတ်တန်း ဓာတ်ပုံသတင်း ထောက်တစ်ဦးကို ရဲသတင်းတပ် ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သ တင်းရရှိသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က မုံရွာမြို့ခံ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုအောင်နေမျိုးကို သတင်းရဲတပ် ဖွဲ့ရဲမှူးမြင့်လွင်က ဖမ်းဆီးပြီး မုံရွာရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ချုပ် နှောင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မုံရွာမြို့နေ ကိုအောင်နေမျိုး နှင့် အပေါင်းပါများသည် ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်တွင် စီစဉ်သူဦးသိန်းစိန်၊ ၀တ္ထု သန်းရွှေ၊ ဇာတ်ညွှန်းကြိုင် ကြိုင်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး မှ စီစဉ်သည့် မိုးလုံးပြည့်ဝါဒမှိုင်း တိုက်သည့် ဇာတ်ကြမ်း ‘ကွန်ဒုံ ရက် ၄၀ ’’ဟု ဖော်ပြထားခြင်းမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကို မေတ္တာပျက်စေရန် မမှန်သတင်းလွှင့်ရန် ကြံစည်၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ဖော် ပြထားကြောင်း သတင်းတပ်ဖွဲ့၏ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားစာ၌ ဖော်ပြ ထားသည်။
ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း မတ်လ ၁ ရက် ရန်ကုန်သို့ ချီတက်လာမည်
5:13 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရန် မန္တလေးမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ခရီးရှည်ချီတက်သပိတ်မှောက်သော ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းအစပ်သို့ ရောက်ရှိလာစဉ် (ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))
လက်ပံတန်းမြို့တွင် ရပ်နားထားသော ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းသည် သတ်မှတ်တောင်းဆိုထားသည့်ရက်အတွင်း အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို အတည်ပြုပေးနိုင်သော တိကျခိုင်မာသည့် တစ်စုံတစ်ရာမရရှိသော ကြောင့် မတ်လ ၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ချီတက်မည်ဟု ပင်မသပိတ် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကပြောသည်။
နိုင်ငံတော်မှ ခွဲမထွက်ရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးဆိုသည့် ရပ်တည်ချက် ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ကြောင်း ‘၀’နှင့်မိုင်းလားအဖွဲ့ သမ္မတထံစာပေးပို့
5:11 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
‘၀’ပြည်သွေးစည်းညီညွတ် ရေးတပ်မတော်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ−အေအက်ဖ်ပီ)
ကိုးကန့်ပဋိပက္ခများကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များက ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန် တိုက်တွန်းပြီး ‘၀’နှင့်မိုင်းလားအဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ခွဲမထွက်ရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲမည် မဟုတ်ကြောင်း အဆိုပါနှစ်ဖွဲ့က သမ္မတထံစာပေးပို့သည်။
7:13 AM အနုပညာ No comments
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနှင့် လိုင်လာခမ်း(ဓာတ်ပုံများ - ဂျေပိုင်/ The Irrawaddy)
ကိုယ်စီမံသလို ထင်တိုင်းဖြစ်မလာတဲ့ ဘ၀တွေကို တွေ့ကြုံလာရတဲ့ လူသားတွေ သုံးနှုန်းလေ့ရှိတဲ့ “ရာဇ၀င်ရိုင်းတယ်” ဆိုတဲ့ စကားကို ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)က ပုံဖော်ပြသတော့မှာပါ။
အဲ့ဒါကတော့ တခြားမဟုတ်ပါ။ “ရာဇ၀င်ရိုင်းသူများ”ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့မှာ စတင် ရိုက်ကူးပုံဖော်နေပြီလို့ ဆိုလိုခြင်းပါ။
တောင်းဆိုချက်အပေါ် အချိန်ဆွဲလျှင် ကျောင်းသားသပိတ် ရန်ကုန် ချီတက်မည်
6:32 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီ နှင့် NNER အဖွဲ့၊ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ဆွေးနွေးပွဲမှာ စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုမှ ကျောင်းသားသပိတ်နှင့် ပညာရေး ဥပဒေပြင်ဆင်မှု အပေါ် ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြား။ သတင်းဓာတ်ပုံ- NNER
ဖေဖေါ်ဝါရီ(၁၁)ရက်နေ့က လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ သဘောတူခဲ့တဲ့ အတိုင်း အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ မူကြမ်းကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ ဆက်ပြီးကြန့်ကြာနေမယ်ဆိုရင် သပိတ် စစ်ကြောင်းတွေကို နဂို သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်ကို ပြန်ချီတက် သွားမယ်လို့ ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီ ကပြောလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ (ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ရက်) မနေ့က ကျင်းပတဲ့ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေးဦးဆောင်ကော်မတီ / NNER တို့ တွေ့ဆုံပွဲအပြီး ပြောဆိုလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကိုညဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
ဆောင်းဦးလှိုင်ကို ဆုရတဲ့ ရွှေတစ်ကျပ်သား ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ နီနီခင်ဇော်
7:06 PM ပြည်တွင်းသတင်း, အနုပညာ No comments
တေးသံရှင်နီနီခင်ဇော်က ‘မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ’သီချင်းကိုရေးစပ်ပေးသည့်တေးသံရှင်ဆောင်းဦးလှိုင်အား ရရှိခဲ့သောဆုတံဆိပ်မှ ရွှေတစ်ကျပ်သားကို သွားရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ကမ္ဘာ့အလှဆုံးအလှမယ်စာရင်းတွင် မြန်မာမယ်နှစ်ဦး ပဉ္စမနှင့်ဆဋ္ဌမချိတ်
6:18 PM အနုပညာ No comments
ကမ္ဘာ့အလှအပဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုက် Beauties Concept ကရွေးချယ်သည့် ၂၀၁၄ အတွက် ကမ္ဘာ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲများမှ အလှဆုံးအလှမယ်စာရင်း နောက်ဆုံးအဆင့် ခုနစ်ဦးတွင် မြန်မာအလှ မယ်နှစ်ဦး ဆက်လက်ရွေးချယ်ခံရ သည်။
12:57 AM ပြည်တွင်းသတင်း, အနုပညာ No comments
Sexy မော်ဒယ်လ် ဇာဇာထက်(ဓာတ်ပုံများ - Zar Zar Htet official facebook မှ)
ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလှလှနဲ့ Sexy ကျကျ မော်ဒယ်လ်တဦးကို အွန်လိုင်း ပရိတ်သတ်တွေ သတိထားမိကြ မယ်ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာထက်မှာ သူ့ရဲ့ Sexy ဓာတ်ပုံတွေဟာ လူသိပိုများ ပါတယ်။ သူကတော့ အသက် ၂၅ နှစ် ရှိပြီး ဥပဒေနဲ့ ဘွဲ့ရထားသူ မော်ဒယ်လ် ဇာဇာထက်ပါ။ မော်ဒယ်လ်ဇာဇာထက်ဟာ သိပ်မကြာသေးခင်ကာလကလည်း ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လောက်ကိုင် နယ်မြေမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဖုန်ကြားရှင် ဦးဆောင်တဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ စိတ်အပန်းပြေပျောက်ဖို့အတွက် Naked sexy အကနဲ့ နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေသွားမယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလ သတင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်လ် ဇာဇာထက်ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၈ လပိုင်းလောက် ကစလို့ Sexy ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ အွန်လိုင်း သုံးစွဲသူတွေအကြား စတင် လူသိများလာခဲ့တာပါ။ သူဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မော်ဒယ်လ်ဂျွန်လွင်ဆီမှာလည်း မော်ဒယ်လ်သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Sexy model ဘ၀ တစေ့တစောင်းရယ် သူ့ရှေ့ဆက် လျှောက်မယ့် မော်ဒယ်လ်ဘ၀နဲ့အတူ သူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ကောလဟလအကြောင်းတို့ကို ဧရာဝတီနဲ့အတူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မေးဖြစ် ဖြေဖြစ်တာလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
11:59 PM ဆောင်းပါး No comments
သတင်းထောက်၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်နှင့် ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါသော ကြက်ခြေနီယာဉ်ကို ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်တပ်ဖွဲ့က တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဒဏ်ရာရရှိသွား၍ အကာအကွယ်ယူပုန်းအောင်းနေသည့် ယာဉ်မောင်း(ဓာတ်ပုံ - အောင်သစ်လွင်)
‘‘အုန်း’’ ဆိုသည့် အသံကြားလိုက်ရပြီးနောက် ‘‘ပစ်ပြီဟေ့’’ဟု အော်ဟစ်သံများ ပွက်လောရိုက်သွားသည်။
‘‘ပတောက် . . . ပတောက် . . .ရွှီး’’ဟု အသံများ တရစပ်ဆက်လက်ကြားရပြီး ကြက်ခြေနီအလံ ထင်ရှားစွာလွှင့်ထူထားသော ဖိုးဝှီးကားလေးမှာ လမ်းဘေးထိုးရပ်သွားသည်။
ယင်းနောက် သေနတ်၊ ပစ်ခတ်သံများ နားကွဲမတတ်ဖုံးလွှမ်းသွားပြီး အော်ဟစ်သံ၊ ကလေးငိုယိုသံများဖြင့် ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံး ကမ္ဘာပျက်သွားသည်။
10:29 PM ပြည်တွင်းသတင်း, ဆောင်းပါး No comments
လောက်ကိုင်ဒေသတွင် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသော တပ်မတော်သားများ (STRINGER/AFP)
သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက ကိုးကန့်တိုက်ပွဲတွင် တရုတ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိကြောင်း ပြောကြားပြီး နောက်တစ်ရက်အကြာတွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးက တရုတ်စစ်တပ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသူများ ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်နေကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုးကန့်အဖွဲ့ထံမှ ဖမ်းဆီးရမိသည့် လက်နက်များအရ ‘၀’တပ်ဖွဲ့ထုတ် လက်နက်များဖြစ်နေပြီး ‘၀’, မိုင်းလား အပါအ၀င် UNFC အဖွဲ့ဝင် KIA, SSA (၀မ်ဟိုင်း)၊ TNLA တို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း ၎င်းက အထောက်အထားဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ သတင်းစာဆရာများအား ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
7:48 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ ဦးဆောင်ကော် မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများနှင့် ကားများကို အဖွဲ့အစည်းအချို့ထံမှ လက်ခံရရှိထားသည်ဟူသော လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံနေသည့် သတင်းများသည် အခြေအမြစ်မရှိဘဲ ပညာရေးဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ်ကို မလိုလားသူများ၏ လက်ချက်သာဖြစ်သည်ဟု ဦးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် မဖြိုးဖြိုးအောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကျောင်းသားများ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြနေသည့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအပေါ် လေးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်သည့် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ NNERနှင့် ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်၊ မနက်ပိုင်းက ကျင်းပနေစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - မင်းမင်း၊ မဇ္ဈိမ)
အမျိုးသမီး လိင်တူစုံတွဲတွေကို မပြောသင့်၊ မမေးသင့်တဲ့ စကားများ
11:15 PM အထွေထွေ No comments
သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာ မိန်းကလေးအချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်နေတဲ့ လိင်တူစုံတွဲတွေ ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ သူုတို့နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ဘာရယ်မဟုတ် ကိုယ်မေး၊ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် တစ်ဖက်လူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရတာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား။ ကိုယ့်စကားကြောင့် ကွက်ခနဲ မျက်နှာပျက်သွားတာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီလို ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခါ သူတို့နဲ့တွေ့ရင် ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေဆင်ခြင်ပြောဆိုရမလဲ သတိထားစေချင်ပါတယ်။
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှားတွေနဲ့ နားလည်မှု မလွဲရန် DKBA ထုတ်ပြန်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ ဦးဖုန်းကျားရှင်ရဲ့ MNDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA) က အစိုးရတပ်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကိုးကန့်အဖွဲ့ကို တိုက်မည်ဆိုပြီး ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေဟာ သတင်းမှားတွေဖြစ်ကြောင်း ကလို့ထူးဘောစစ်ဌာနချုပ်က ၂၂ ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲ ကျဆုံးစစ်သည်များ၏ အရိုးပြာအိုးများ အခမ်းအနားဖြင့် ဂူသွင်းသင်္ဂြိုလ်
8:10 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
လောက်ကိုင်ဒေသ တိုက်ပွဲများတွင် ကျဆုံးသွားသည့် တပ်မတော်သား အရာရှိ၊ စစ်သည်များ၏ အရိုးပြာအိုး များအား ဂူသွင်းသင်္ဂြိုလ်သည့် အခမ်းအနားကို ယမန်နေ့က နေ့လည်က လားရှိုးမြို့ အညတရ စစ်သည် ဗိမ္မာန်တွင် ပြုလုပ်ရာ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အောင်စိုး၊ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ တပ်ရင်း/ တပ်ဖွဲ့မှူးများ၊ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ကြောင်းသိရသည်။
ဓာတ်ပုံ- ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန
8:03 PM အနုပညာ No comments
စစ်ဗျူဟာအရ အရေးကြီးတောင်ကုန်းများ တပ်မတော် သိမ်းပိုက်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တိုက်ပွဲများတွင် တပ်မတော်မှ သုံးဦးကျ၊ ခုနစ်ဦးဒဏ်ရာရ၊ ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်တပ်ဖွဲ့မှ ခြောက်ဦးသေ
ကိုးကန့်ဒေသတွင် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်မြေရှင်းလင်းရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တပ်မတော်သားအချို့ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − အောင်သစ်လွင်)
လောက်ကိုင်−ကုန်း ကြမ်းကားလမ်းပေါ်ရှိ ၁၈ မိုင် လမ်းဆုံအနီးတစ်ဝိုက် ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ခြေ ကုပ်ယူထားသော စစ်ဗျူဟာအရ အရေးကြီးသည့် တောင်ကုန်း များကို တပ်မတော်က သိမ်းပိုက် နိုင်ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် အခြားနေရာ၌ တိုက်ပွဲများဆက် လက်ဖြစ်ပွားရာ နှစ်ဖက်ကျဆုံး မှုများရှိကြောင်း အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
တိုက်ပွဲဝင် တပ်မတော်သားများအား ကိုယ်တိုင်အားပေးခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များ
6:31 PM ပြည်တွင်းသတင်း, အနုပညာ No comments
အနုပညာရှင်များအနေဖြင့် လောက်ကိုင်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် ကျဆုံးသွားသော တပ်မတော်သားများနှင့် တိုက်ပွဲဝင်တပ်မတော်သားများအတွက် အားပေးစာများ ရေးသားပို့ပေးခဲ့သကဲ့သို့ ကောက်ခံရရှိသည့် အလှူငွေများကိုလည်း ဖေဖော် ၀ါရီ ၂၁ ရက်က အနုပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအစီအစဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့သူအချို့၏ စကားသံများကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မော်ထိုက်၊ ကုန်းကြမ်း၊ လောက်ကိုင်၊ ချင်းရွှေဟော်နှင့် ကွမ်းလုံဒေသ တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ငါးသောင်းကျော်အထိ ရှိနေ၊ ကြက်ခြေနီယာဉ်တန်းများ ပစ်ခတ်ခံရပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထား
6:18 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ပေးထားသော ကွဲကွာမိသားစုများ သတင်းစကားချန်ထားရန် ကြေညာသင်ပုန်းကို ကြည့်ရှုနေသူတစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ-ထွန်းနေလှိုင်)
မော်ထိုက်၊ ကုန်းကြမ်း၊ လောက်ကိုင်၊ ချင်းရွှေဟော်၊ ကွမ်းလုံဒေသများတွင် တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်အထိ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အရေအတွက်မှာ ငါးသောင်းကျော်အထိ ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး လောက်ကိုင်မြို့တွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေများကို လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း လောက်ကိုင်ဒေသအတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူများထံမှ သိရသည်။
ဂျပန်တွေကြံကြံဖန်ဖန် တီထွင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းများ
1:13 AM နည်းပညာ No comments
‘‘ ချင်ဒိုဂူ ’’ ဂျပန်ဘာသာစကားမှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အရာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အခုဖော်ပြမှာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင် ကြံကြံဖန်ဖန်တီထွင်ထားတဲ့
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်တွေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပမေယ့် ဒီတီထွင်မှုတွေကို ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ မတွေ့ရသေးပဲ ဂျပန်တွေကိုယ်တိုင်ကသာ ပြန်လည် အသုံးပြုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
12:39 AM အနုပညာ No comments
မြန်မာ့ဂီတလောက အပြောင်းအလဲများစွာထဲကမှ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်းက စတင်သန္ဓေတည်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဂီတဆုပေးပွဲရဲ့ ၂ဝ၁၄ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးဂီ တဆု ချီးမြှင့် ပွဲကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ဝ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲမတိုင်မီက ဂီတလောကသားတို့ရဲ့ ဂီတဆုပေးပွဲအပေါ် ရင်ခုန်သံကိုလည်း တင် ဆက် လိုက် ပါ တယ်။
ကြက်ဥတွေကို ရေခဲသေတ္တာ တံခါးပေါက်အကန့်မှာ ထည့်မထားသင့်
8:26 PM ကျန်းမာရေး No comments
ကျွန်ုပ်တို့ အများစုက အစားအစာ သိမ်းထားတဲ့ ရေခဲသေတ္တာကို အရေးမပေးတတ်ကြပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အစားအစာတွေကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သိမ်းထားချင်တယ်၊ အချိန်ကြာကြာ ကောင်းမွန်အောင် ထားချင်တယ်ဆိုရင် ဒါ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
ကျင်ငယ်ကို မျက်နှာပေါ် အသုံးပြုသင့်လား
8:25 PM အထွေထွေ No comments
မျက်နှာအသားအရေ လှပဖို့ဆိုရင် လူတိုင်း နည်းလမ်းအသစ်သစ်တွေ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ကြပေမယ့် ကျင်ငယ်ကို မျက်နှာပေါ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ အခါမှာတော့ အထူးဆန်းဆုံး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျင်ငယ်ရေမှာ အသားဓာတ်၊ သတ္တုဓာတ်၊ အင်တီဘော်ဒီနဲ့ ဗီတာမင်စတဲ့ အာဟာရတွေ ပါဝင်တာကြောင့် နှင်းခူနာ၊ ဝက်ခြံနဲ့ တခြား အသားအရေပြဿနာတွေ လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖုန်ကြားရှင်တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲမှ ပြည်သူများ၏ ရှ...
ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များတွင် ညပိုင်းချိန်းတွေ့သော စုံ...
အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ရေးတင်...
ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း မတ်လ ၁ ရက် ရန်ကုန်သို့ ချီတက်လ...
နိုင်ငံတော်မှ ခွဲမထွက်ရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲ...
တောင်းဆိုချက်အပေါ် အချိန်ဆွဲလျှင် ကျောင်းသားသပိတ် ရ...
အမျိုးသမီး လိင်တူစုံတွဲတွေကို မပြောသင့်၊ မမေးသင့်တ...
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းမှားတွေနဲ့ န...
ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် အစွန်းတရားနှစ်ပါး - အောင်ဟိန်း
ဝေလနဲ့ နီနီခင်ဇော်တုိ့ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ မြန်မာဂီတ ထူ...
ဇာတ်လမ်းများကို စိစစ် ရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၀...
ကြက်ခြေနီကားတစ်စီး ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရပြီး လေးဦးဒဏ...
ဘ၀လက်တွဲဖော်ကို ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးရွေးမယ့် ရွာသူ...
မိခင်ကို ရွှေတိဂုံစေတီဖူးစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင...
ညအိပ်ယာဝင်ခါနီး မစားသင့်တဲ့ အရာများ
နိုင်ဂျာနိုင်ငံတွင် နာရေးတစ်ခုသို့ လေယာဉ်တစ်စီး လာ...
တောင်သမန်ရွှေအင်းက အလုံပိတ်တဲပိုင်ရှင်များကို တရားစ...
ကမ္ဘာ့အမွေးအမျှင် အထူဆုံး မိန်းကလေး
အနမ်းခြွေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိကောင်းစရာ အချက်တချို့
ဖုန်ကြားရှင် နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ
လူမိုက်တစ်သောင်း ကဲ့ရဲ့ရှောင်းလည်း လူကောင်းတစ်ယောက...
လောက်ကိုင်ဒေသ၌ ကြက်ခြေနီနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရမှု သတင်းအချက...
၁၂ အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ ယုံကြည...
လောက်ကိုင်မှရသော တပ်မတော်အတွက် သင်ခန်းစာ
ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ရီးယဲလ်နှင့် ဘိုင်ယန်တို့ ဗိုလ်စွ...
အီရတ်တွင် လူ ၄၅ ဦးအား အိုင်အက်စ်တို့က အရှင်လတ်လတ်...
‘‘ဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့ တကယ့်အဓိကမေတ္တာနဲ့ စေတနာနဲ့ထာ...
ရည်းစားဟောင်းပေးထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာကို ဆက်လက်ဆင်မြန်...
မွေးနေ့အလှူ အဖြစ် သီလရှင်ဝတ်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်နှင့် သရ...
ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွင် အရေးပေါ်...
လောက်ကိုင်နှင့် ချင်ရွှေဟော်ကြားတွင် ကြက်ခြေနီအလံ လ...
ဖုန်ကြားရှင်၏ ကိုးကန့်အဖွဲ့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသိ...
ပင်မကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ခရီးစဉ် သုံးသ...
"အာလူး သာကူး နှာဗူး ဂန်ဒူး" က တိုက်ဆိုက်မှုရှိတဲ့သ...
အဝတ်ဗလာ အိပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
သီလရှင်ဝတ်မယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် အကြီးမားဆုံး အလှူပါ...
ဗကသခေါင်းဆောင် ကျော်ကိုကို လုံခြုံရေးအရ သပိတ်စစ်ြေ...
အသဲကွဲနေတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် Victoria Justice ပေးတဲ့...
ခရစ်ယာန်တွေကို IS ခေါင်းဖြတ်သတ်မှု အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား ...
လေးပွင့်ဆိုင်သဘောတူမှု ကျောင်းသားတို့ မလိုက်နာက ဥပေ...
စီရော်နယ်ဒို၏ လာလီဂါဟက်ထရစ် စံချိန်ကို မက်ဆီ လိုက်မီ
ကြက်ဥအနှစ်နဲ့ အကာကို အတွင်းအပြင် ပြောင်းပြန်ဖြစ်အေ...
အိန္ဒိယတွင် ဝက်တုပ်ကွေးကြောင့် လူပေါင်း ၄၈၅ ဦးသေဆုံး
Model- Ei Nu Wai
နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းနဲ့ သမ်းဝေခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်...
အခြေခံပညာ စာမေးပွဲများ ပုံမှန်ထက် နောက်ကျမည်
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ၏ ကားတိမ်းမှောက်၍ ၁၀ ဦးခန့် သေဆုံး
သမ္မတအဖြစ်အရွေးခံရေးထက် တပ်မတော်၏ရှေ့ရေးကို ပိုမို...
တပ်မတော်ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုရင် . . .(၂)
တပ်မတော်ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုရင် . . .(၁)
Khin Wai Phyo Han - Miss Myanmar International 2014
သင်မသိသေးတဲ့ ရိုးရှင်းထိရောက်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာဆောင်...
ခွင့်မရရင် ခေါက်ဆွဲတပွဲတောင် ယင်လပ် စားခွင့်မရှိဟု...
စုံတွဲများ အတွက် ချစ်သူများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပမည်
ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူအား လက်ထပ်ခွင့် အဓမ္မတောင်းခံခဲ့...
အသက်ပေးဆပ်နေရတဲ့ ရှေ့တန်းရောက် အာဇာနည်တွေကို နိုင်...
“ရောင်းအကောင်းဆုံး အမျိုးအစားကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပ...
လောက်ကိုင်မြေအား သွေးစွန်းစေခဲ့တဲ့ ဖုန်ကြားရှင်ရဲ့...
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့(ရာ ပြည့်) နှစ်တစ်ရာ